China Corneal curvature mitaBL-8002 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Sezvo iyo corneal refractive simba inoverengera 2/3 yesimba rese rekuratidza reziso revanhu, kuyerwa kwekukwirisa kwekona kunogona kunzwisisa simba rese rekuratidzira reziso remunhu. Panguva imwecheteyo, sezvo mazhinji eziso remunhu astigmatism rinobva ku cornea, iyo corneal curvature kuverenga kwakanaka kwazvo maererano ne optometry uye ongororo yemishonga. zvakakosha. Mune komputa optometry, iyo corneal curvature chiyero chakataurwa
Muchikamu chino, isu tichaunza iyo optical keratometer uye mashandisiro ayo. Iyo keratometer inoshandisa iyo inoratidzira zvimiro zveiyo cornea kuyera iyo nharaunda yayo yekukombama. Zvinoitwa nekeratometer zvinotevera RestZororo reshaya nemusoro wemusoro zvinogona kugadziridzwa kuitira kuti musoro wemusoro wenyaya unogona kugadziriswa panguva yekutarisa; mubato unogona kusimudzwa kumusoro uye pasi kugadzirisa kukwirira kwechiridzwa kuitira kuti maziso emusoro wacho ave padanho rimwe chete. ③Mavhiri maviri emadhigiri anogona kuyera kutenderera kwemaviri makuru meridians. ④) Kune chiyero cheaxial, icho chinogona kuratidza chinzvimbo chemaviri makuru meridians, uye iyo yese dhiramu yemamirita yakakombama inogona kutenderedzwa. Icho chirevo chinofungidzirwa kune iyo cornea yemuongorori; iyo yekutarisa yekubata mubato inogona kutamisirwa kumashure nekudzoka kuti itarise iyo iyo cursor pane iyo cornea yemuongorori zvakajeka.
① Chiso cheziso chinogona kugadziridzwa kuitira kuti maziso emuongorori anyatso tariswa zvakajeka.
Rest Zororo reshaya nemusoro wemusoro zvinogona kugadziridzwa kuitira kuti musoro wemusoro wenyaya unogona kugadziriswa panguva yekutarisa; mubato unogona kusimudzwa kumusoro uye pasi kugadzirisa kukwirira kwechiridzwa kuitira kuti maziso emusoro wacho ave padanho rimwe chete.
Wheels Mavhiri maviri emadhigiri anokwanisa kuyera kutenderera kwemaviri makuru meridians.
Is Kune chiyero cheaxial, icho chinogona kuratidza chinzvimbo chemaviri makuru meridians, uye iyo yese dhiramu yemamirita yakakombama inogona kutenderedzwa.
⑤ Iyo inotora inoratidzirwa kune iyo cornea yemuongorori; iyo yekutarisa yekubata mubato inogona kutamisirwa kumashure nekudzoka kuti itarise iyo iyo cursor pane iyo cornea yemuongorori zvakajeka.
Zvakajairika corneal curvature kuverenga kunogona kushandisa nharaunda ye curvature (mm) kana diopter (D). Mune optometry, zvinowanzove zviri nyore kuratidza diopter, uye inogona kupa zvakananga mamiriro eacne corneal astigmatism, senge: 43.00 D @ 180 / 44.00 D @ 90, Tinogona kuwana zvakananga corneal astigmatism ya 1.00 D.
Iko kukosha kukuru kweiyo unit ye ​​diopter ndeyekuti zviri nyore kune vanobata malenzi evanyanzvi kuti vaone huwandu hwasara astigmatism (vakapfeka rakaoma idenderedzwa rekubata lens), nekuti iyo refractive index yemisodzi iri padyo padyo neiyo refractive index yeiyo corneal curvature zvakaverengerwa neiyo corneal curvature. Huwandu hwakayerwa hwe astigmatism hwakaenzana neyakaenzana neiyo "misodzi yemisodzi" mushure mekupfeka lenzi, saka nekuenzanisa huwandu hweastigmatism hunoyerwa nekeratometer ine huwandu hweastigmatism hunoyerwa nereurudzo, iyo yakasara astigmatism inogona kukurumidza kufungidzirwa .
Pashure: Kusiyanisa Kunzwisisa MeterRM800
Zvadaro: Corneal pamusoro yakakombama uye diopter yekuyera chiridzwa YZ38
Corneal Curvature Meter